ताजा समाचार Archives • raradiodarpan.com
ट्रक दुर्घटना, चालक र सह–चलाक ट्रक भित्र च्यापिए
४ असार, जनकपुर । दाङबाट जाजरकोटतर्फ जाँदै गरेको ट्रक सुर्खेतको गुर्भाकोटमा दुर्घटनामा परेको छ । गुर्भाकोट नगरपालिका–९ भालुखोला चौपारी डाँडा नजिक शनिबार बिहान पाँच बजेको समयमा ना ४ ख ९७ ६१ नम्बरको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीका अनुसार अनियन्त्रित भएर ट्रक ५० मिटर...
जेलभित्रै बाबुराम र रेशम चौधरीको वार्ता !
४ असार, काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री जसपा संघिय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगेका छन् । शनिबार बिहानै चौधरीलाई भेट्न कारागार पुगेका भट्टराईले टिकापुर घटना राजनैतिक घटना रहेको भन्दै सरकारले त्यही ढंगले निरुपण गर्नुपर्ने बताएका थिए । भट्टराईलाई चौधरीले...
रामकुमारी झाँक्रीले कुम्लो बोकेर मन्त्री क्वाटर छोडेको तस्बिर हेर्न आतुर छु :दिपेन्द्र कन्डेल
३१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एसबाट सरकारमा सहभागी भएका रामकुमारी झाँक्री सहित प्रेम आले , किसान श्रेष्ठ र विरोध खतिवडाको पद तत्कालका लागी थमौती भएको छ । खुस्कीसकेको मन्त्री पद तत्कालका लागी टरे पनि यत्रतत्र यहि बिषयमा चर्चा र बहस चलिरहको छ । आइतबार...
जम्बो टोलि सहित यी नेताहरु माओवादीमा इन्ट्री: देउवा जिल्लै ! (नामावली सहित)
३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेशको तयारी गरेका छन् । गुटबन्दी र व्यक्तिवादी स्वार्थमा लिप्त भएपछि कांग्रेसले लखेटेका सिंह माओवादी प्रवेशको तयारीमा लागेका हुन् । सिंहले क्रियाशीलता सदस्यतादेखि स्थानीय तह निर्वाचनसम्म जिल्लामा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन सक्रिय रहेका...
एक्कासी के भयो ओलीलाई ? अध्यक्ष पदबाट राजिनामा !
३१ जेठ, काठमाडौं । आगामी मंसिर महिनाभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने कुरा लगभग पक्का छ । मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कसको अनुहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पनि प्रष्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रुनु न...
घरभित्रै यस्तो काण्ड मच्चाएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वली पक्राउ
३१ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला खत्री वलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एक महिला र उनकी छोरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा वलीलाई आज बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ आलुमण्डीको पछाडी बस्ने मीना भण्डारी बस्नेतको घरभित्रै गएर...
एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड-माधव तयार, यस्ताे छ सर्त !
३१ जेठ, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने सर्तमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिएलगत्तै दुवै दलका...